Short Story:Ndakamusvira Maidei – VanodaZvinhu
Short Story:Ndakamusvira Maidei
by DrSviro · August 14, 2015
Sokurangana kwatanga taita nemudiwa wangu Maidei ndakamuka pakati pahwo usiku ndokunanga kumba kwavo kana kumbotya kufamba nguva idzi munzvimbo yaiva nemukurumbira nokuti pfungwa dzangu dzaiva pane zviri mberi. Ndakasvika kwakujamba mudhuru wakapoteredza imba yavo. Mudhuri uyu waiva ne zvipandi zvemabhodhoro akapwanywa ndokunamirwapo asi ini kucheka kwawo andina kumbokunzwa nokuti pfungwa dzangu dzaiva pane zvaiva mberi.
Sekurangana kwedu ndakasvika pa window remba yaaivata ndokuchema kunge gurwe zvakapa kuti amuke avhure window rake sekuti aibva aziva kuti ndini ndaiva ndasvika. Ndini uyo kata kupinda napa window kwakutambirwa ne mudiwa wangu maidei akaita zvokuvhura mapapiro kwakunditi mbundi ndiye tsvodi pamuromo chaipo. Mwana anga akapfeka rokwe remucheka mutete raiva rakapfava zvekuti kuribata waitoita ngati urikubata ganda chairo kuku ainhuwirira somunhu anga achangobva mukushamba. Ndakachimupiruzira ndiye nhanzvi muhuro ndikanzwa mwana ofemera pamusoro. Mboro yangu kumira yakamira ndichiri munzira hangu asi apa yakabva yawedzera kuita danda kunge riya romupfuti.
Ndakachibva ndamuti mbaa mwana apa ndakagumhisa mboro yangu pamuviri pake mwana akabva angopera simba ndokupunzikira pa mhasa paaive akawarira. Ndakachitanga kukatanura rokwe raanga akapfeka riya zvoshoma nezvishoma kwakupinza ruoko mubhurugwa make wanikwe mangova mukuvisi wega wega. Mwana ndakamumenya akasara ava bagwe kushama iniwo kwakukatanura mbatya dzangu dzose. Ndaka tanga kumutsvoda pamuromo ndochidzika kuhuro kwakumboita long stop pa mazamu awo andakayamwa kusvikira mwan ajuita kuzvongonyoka souya ane mudzimu weshato ini kwakuti dzakei kumutomatisi kwacho kwakuchidya beche ndaiita zvokuti ndikamboti rurimi rwotekenedza kabhinzi ndochinja ndoita rokutsoda ungati muromo.
Mwana akachibva ati aiwa zvakwana ndokunditi dzvii mboro kwakuiti mumukanwa make ndoo. Mboro yakamwiwa nekusvetewa ingati chihwitsi chezvitanda chiya apa rume ndaingoyuwira mutezo wachioma nyama dzasungana nekuterera kunakirwa.
Pedzedzo akabva angopuna apamboro akaibata muruoko gwake ndokuipfekera mubeche rake kwakutanga kuikoirira iye ini kwakuita manyawi kwakumuti dzvii paudyu hwake ndokutanga kutsimbirira beche mwana ndakamusvira akapuna kudaro kusvika ndanzwa achigwina gwina nokuchema asi pakuchema apa ndakamubata muromo sokuti ndaisada kuti vabereki vake vevari kumba yavo yokuvata vasanzwe.
Ndakachimuvatisa manhede kwakuiita makwiriro echinyakare aya ekuti ini pamusoro iye pazasi ndaiti ndikati musoro wega ndomboipinza ndichigumira pamusoro wendozoipinza half ndichidaro kusvikira iye andidhonza kuti ipinde yose. Mwana anechikapa iyeye mboro yaiti ikanzi kurudyi ruboshwe yonzi mukati yomboita seinosvipiwa ichizomedziwa becherai ita ngati rine rurimi takazopinda pa highway no speed limit heheda ndokutanga kuita kunge parikupepetwa zviyo.
Ndakachidzamba nedivi kwakurova beche ndaktarisa pa battle zone pacho kwakunzwa manyukunyuku pasina nguva ndakanzwa mboro yoita kuvhuta kuti vhu vhu vhu iye kwakuchimonera mmakumbo ake pamusana wangu ndokuwedzera speed paakangoti one two ini dzvooooo kutunda apa rume ndakaita zvokudzvova kunge riya bhuru remashanga ndokuti rabada kupunzikira pamusoro pake iye kwakuramba akanditsimbirira ndokuti koire koirei kwkutanga kugwina gwina ndokutunda zvakare. Tese takabva tangoti rabada kuzorora ka. Pasina nguva ndakanzwa mukova kunzi gwee kuvhurwa zvekumanikidzwa rambi kwakunzi ngwee kubakidzwa apa tiri mushwete kudaro. Maziso akamhanyira kugonhi wanikwe amai na baba vake Maidei vakamirapo vakati tuzu…………Chipedzisaiwo zvakazoitika
by DrSviro · Published May 26, 2015
by DrSviro · Published January 27, 2016
Next story Short Story: Jambanja Palodge, tadhumanisana
Previous story Quickie nemukadzi webestfriend taenda kubhaleki